दिमागको स्मरण शक्ति कसरी बढाउने ? यसो गर्नुहोस् छुरा बन्छ दिमाग !:: Naya Nepal
दिमागको स्मरण शक्ति कसरी बढाउने ? यसो गर्नुहोस् छुरा बन्छ दिमाग !
काठमाडौं । समाजमा होस् या त स्कुलको कुनै कक्षाकोठामा होस्, हरेकको स्मरणशक्ती फरक फरक हुन्छ । विद्यार्थीहरु मध्ये कसैले कक्षा(कोठामा पढेकै भरमा सम्झिन सक्छ भने कोही विद्यार्थीले रातदिन पढ्छ, तरपनि परिक्षाको समयमा बिर्सिन्छ । यस्तो कारणले ऊ तनावमा बसिरहेको हुन्छ र कति विद्यार्थी त यही कारणले आफूले जीवनमा केही गर्न नसक्ने निचोडमा पुग्छन् । धेरैले यसलाई मानिसको जन्मजात क्षमता भनेर बुझ्छन् ।
वास्तवमा, स्मरण शक्ति पछि पनि बढाउन सकिन्छ र आफ्नो दिमागलाई तीक्ष्ण बनाउंदै लैजान सकिन्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो दिमागलाई शान्त बनाउनुपर्छ । दिमागमा धेरै कुरा खेलाउन छोड्नुपर्छ । आफूमा एकाग्रता बढाउनुहोस् । यसो गरेपछि तपाईंले आफूले पढ्ने कुरामा पांच वटै ज्ञानेन्द्रीय प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा त्यो तपाईंको दिमागमा छिटो र पछि सम्म बसिरहन्छ।
धेरै व्यक्तिहरुको रट्ने बानी हुन्छ । लामो समयसम्म सम्झिनको लागि यो गलत हुन्छ। यो कमजोर तरिका हो , किनकी यसमा तपाईंले आफ्नो दिमागमा कुनै दृश्य बनाइरहनुभएको हुँदैन। यसमा तपाईंको एउटा ज्ञानेन्द्रीय मात्र प्रयोग भैरहेको हुन्छ । त्यसैले पढ्दा आफूले पढेको कुराको दिमागमा एउटा दृश्य बनाउनुहोस् । आफूले पढिरहेको कुराको अर्थ लगाएर वा पढिरहेको कुराको यत्तिकै पनि दिमागमा दृश्य बनाउनुपर्छ ।
परिक्षा अगाडी जति नै पढे पनि परिक्षामा बिर्सिने बानीले धेरै विद्यार्थी तनावमा आइरहेका हुन्छन् । कतिपय राम्रा विद्यार्थी पनि परिक्षामा दबाब महसुस गरेर पढेको कुरा बिर्सिन्छन् र परिक्षामा आफूले चाहेजस्तो राम्रो गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा विद्यार्थीको जीवनमा समेत असर परिरहेको हुन्छ । यसबाट छुटकारा पाउनको लागि परिक्षाको तयारी गर्दा लामो सास लिने अभ्यास गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको लागि यो एउटा मेडिटेसन जस्तै हुन्छ ।